UMpengesi uthi uHunt uzonikwa amandla ayenawo kwiWits
Uma kuwukuthi kuzokwenzeka njengokukhuluma kukasihlalo weChippa United, uSiviwe “Chippa” Mpengesi, uGavin Hunt uthole ikhaya elimfanele. Ngokusho kukaChippa, uHunt ngeke abe ngumqeqeshi nje, kodwa uzoba yimenenja.
Lokhu kuchaza ukuthi uzoba namandla okuzisayinela abadlali abafunayo ngendlela ayenza ngayo esakwiSuperSport United neBidvest Wits phambilini. Sekuwumlando ke ukuthi lo mqeqeshi oneminyaka engu-57 waba nempumelelo engakanani kula maqembu.
Ukungabi nawo amandla okuzisayinela abadlali ngenye yezinto okuvele ukuthi zamqhatha nabaphathi kwiKaizer Chiefs emxoshe kabuhlungu sekusele imidlalo emibili kuphele isizini. Ekhuluma ngemuva kokumemezela ukuthi useqashe uHunt, uMpengesi uthe uzoba yimenenja, hhayi umqeqeshi nje.
“Ngiyamamukela umqeqeshi wethu… hhayi wothi ngilungise. Empeleni akayena umqeqeshi nje. Uyimenenja ngoba uza lapha nje uzele okungaphezulu kokuqeqesha iChippa. Uzele ukuzokwakha leli qembu, asize abantu base-Eastern Cape,” kusho uMpengesi.
Lo sihlalo unegama elibi nokho ebholeni lakuleli njengoba ehlale exosha abaqeqeshi uma iqembu like ladliwa ngendlela engamjabulisi. Uke wazifaka obishini ngesizini edlule waze wacishe walahlekelwa abaxhasi kulandela ukuzama ukuqasha uLuc Eymael.
“(Leli qembu) Libaluleke kakhulu kubantu base-Eastern Cape ngoba lesi sifundazwe sibizwa ngesizinda sezinkakha (zezepolitiki)… isizinda la uNelson Mandela azalelwa khona. Lo mkhandlu esingaphansi kwawo uqanjwe ngaye.
“IChippa United yilona kuphela ithemba labantu base-Eastern Cape ikakhulukazi abasebancane abafuna ukudlala ibhola ezingeni eliphezulu kuleli baze bayofika naphesheya. Lesi sizinda sesikhiqize amagama amakhulu ebholeni lakuleli.
“Ngebhadi, iningi labo kwadingeka ukuthi baze baye eGoli ukuze bafeze amaphupho abo. Ngokuletha kwethu uHunt lapha, silethe iGoli eduze. Sifuna ukutshela izingane zakulesi sizinda ukuthi akudingeki zize ziye eGoli. UGavin Hunt uyaziwa, akudingeki ngize ngimchaze.
“Ngiyabonga nje ukuthi ngemuva kokukhuluma naye uwuzwile umbono esinawo ngaleli qembu nokuthi avume ukuza lapha. Akazele ubala lapha. Uzokwenza umehluko futhi thina sizomeseka.
“Akukho engizokusho kuwe mqeqeshi ngaphandle kokuthi siyakwamukela. Sicela usenze siziqhenye. Njengabaphathi sonke sizokweseka. Sifuna iqembu lishintshe kule sizini. Isizini yethu yokushintsha lena,” kusho uMpengesi.
UHunt – owaziwayo ngokungandi kakhulu nagamazwi kodwa ofuna ukukhulunyelwa wumsebenzi wakhe – uthe lo msebenzi anikwe wona uyinselelo enkulu.
FUNDA NALA: U-Akpeyi ufuna ukwelapha isilonda ngokuwina iChampions League neChiefs
“Lo msebenzi ngiwuthatha njengenselelo enkulu, futhi iyangijabulisa. I-Eastern Cape yindawo la inqwaba yabadlali bemidlalo ehlukene bedabuka khona futhi le ndawo kufanele ibe neqembu lebhola eliqinile abantu abazoziqhenya ngalo,” kusho uHunt.
Njengoba uMpengesi edume ngokusheshe acikeke, kuthiwa uHunt uzivikele kulokhu ngokuthi afake imibandela yokuzivikela kwinkontileka yakhe. Okunye osekuvelile wukuthi ufuna ukulanda uDiane Klate ukuba azoba yisekela lakhe.
Previous Previous post: Bahaqwe yiCovid kwabhuntsha umdlalo weTest wamaBhokobhoko
Next Next post: UMshini yisikhali seChiefs esincanyana kodwa esiyingozi